काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग ४३ करोड, कति हुन्छ आपूर्ति? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग ४३ करोड, कति हुन्छ आपूर्ति?
काठमाडौं : सङ्घीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता छ तर आपूर्ति भने वर्षात्मा १५ करोड लिटर र हिउँदमा आठ करोड लिटर मात्र भइरहेको छ ।
वीरशम्शेरको पालादेखिको पाइप वितरण प्रणाली भएकाले करीब तीन करोड लिटर खानेपानी चुहावट हुने गरेको आज राजधानीमा आयोजित काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को १३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३१ पुग्यो
विसं २०७८ को अन्त्यसम्म मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । मेलम्ची आएपछि हिउँदमा पनि २५ करोड लिटर पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । धारामा पानी नआएपनि ८० देखि ८५ प्रतिशत उपभोक्ताले मासिकरुपमा महसुल तिरिरहेका छन् । रासस
ट्याग्स: काठमाडौं, खानेपानी